IPoco M3 Pro, iRedmi Qaphela i-10S kunye neRedmi Qaphela i-10 Pro ngamaxabiso angenakuphikiswa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IPoco M3 Pro, iRedmi Qaphela i-10S kunye neRedmi Qaphela i-10 Pro ngamaxabiso angenakuphikiswa
UDaniPlay | | Iiselfowuni, Xiaomi
Izixhobo zefowuni kunye neewatchwatches ziye zafumana ubunzima kwimarike, zimbini zeemveliso ezinesidingo esiphezulu ukuza kuthi ga ngoku. Phakathi kwazo ezinye iimodeli zikhanya ngokukhanya kwazo, njengePoco M3 Pro 5G, iRedmi Qaphela i-10S, iRedmi Qaphela i-10 Pro kunye neXiaomi Mi Band 6.
Indawo eyaziwayo ye-AliExpress inezininzi zonikezo, kubandakanya iimodeli esele zikhankanyiwe eziza nesaphulelo esibalulekileyo kwabo bajonge ngoku ukutshintsha iifowuni okanye i-smart band. Nganye yeefowuni inokuthengwa ngoqwalaselo olwahlukileyo lwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi.
Akukho nanye eyahlukileyo eyasungulwa ngo-Matshi, zonke zinezixhobo ezinamandla kwaye ziyinyani. IPoco M3 Pro iyafumaneka Kwi-AliExpress nge-196 ye-euro imodeli ene-6 GB yememori kunye ne-128 GB yokugcina, eyandisiweyo ngokuba necala esecaleni.
Phakathi kweempawu zayo Iscreen se-6,5-intshi epheleleyo ye-HD + LCD ikhanya ngenqanaba lokuhlaziya le-90 HzIglasi yeGorilla 3 kunye neDotDisplay. I-6 GB ye-RAM ye-LPDDR4x yohlobo, ngelixa ugcino luyi-UFS 2.2, ehamba nebhetri ye-5.000 mAh ene-18W ekhawulezayo.
Ixhotywe ngeekhamera ezine, ezintathu zangasemva, Ngelixa enye yazo ingaphambili. Ukuqala ngasemva, iPoco M3 Pro 5G iza kunyuka iilensi eziphambili ze-megapixel ezingama-48, eyesibini yi-2-megapixel macro, ngelixa eyesithathu ilensi enzulu ye-2-megapixel. Umphambili zii-megapixels ezisi-8.
Iza ifakwe kwiprosesa yeDimension 700, iMali-G57 MC2 yemizobo ye-chip, ukongeza ekubeni unxibelelwano oluphezulu, kubandakanya i-5G, iWi-Fi, iBluetooth, iNFC kwaye iyiDual SIM. Inkqubo yokusebenza yi-Android 11 ngonxibelelwano lwe-MIUI 12, zonke ezinokuhlaziywa kwi-MIUI 12.5 kunye neenguqulelo ezizayo.
1 Inqaku leXiaomi Redmi 10S
2 Xiaomi Redmi Qaphela i-10 Pro
Inqaku leXiaomi Redmi 10S
Yayinikwa kuthotho lweNqaku 10 nguXiaomi njengenye yeefowuni zokungena ezinomdla ngenxa yoqwalaselo olumanyanisiweyo. Ifowuni ene-6/128 GB yoqwalaselo inokuthengwa Kwi-AliExpress ngee-euro ezingama-189, ngelixa i-8/128 GB iya kwi-227 euro.
I-Redmi Qaphela i-10S inyusa iscreen se-6,43-intshi Super AMOLED Full HD + screen, ngokukhusela ngokuchasene nemikrwelo kunye namaqhuma, isuka kwigrafti eyaziwayo yeGorilla Glass. Iphaneli iyakhazimla, yenye yezona zinto zibalulekileyo, ukongeza ekubeni phantse sonke isikrini, i-bezel ibonakala emazantsi.
Idibanisa iHelio G95 njengeprosesa, 6/8 GB yememori ye-RAM I-LPDDR4x, i-64/128 ye-GB yokugcina kwaye iya kuthi yandiswa ngenxa yesimo seMicrosoftSD. Ibhetri yale modeli yi-5.000 mAh, zonke zineentlawulo ezikhawulezayo ze-33W, ezikwazi ukutshaja ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100% ngaphezulu kwemizuzu engama-45.
Ikhamera ephambili yeRedmi Qaphela i-10S zii-megapixels ezingama-64, okwesibini yi-8 megapixel ye-lens ebanzi ye-engile, eyesithathu yi-2 megapixel macro kunye neyesine ngobunzulu be-2 megapixel. Iilensi zangaphambili zii-megapixels ezili-13. Inkqubo yi-Android 11 ene-MIUI 12.
Xiaomi Redmi Qaphela i-10 Pro
I-Redmi Qaphela i-10 Pro ngokuqinisekileyo yenye yezona smartphones ziqwalaselwe kakuhle ukusuka kumenzi, ekubeni yimodeli ye-4G kodwa ngomgangatho wexabiso elinomdla. Imodeli esemgangathweni inexabiso nge-239,99 euro Kwi-AliExpress, ukuba yenye yezona ntengiso zibalaseleyo ukusungulwa kwayo.
Ifowuni yongeza isikrini esikhulu se-6,67-intshi ye-AMOLED epheleleyo ye-HD + kunye nenqanaba lokuhlaziya le-120 Hz kunye nomyinge wepaneli wama-20: 9. Ukhuseleko olugcinayo yiGlasi yeGorilla, ilungele ukuyigcina nakweyiphi na iscuff okanye ukukrwela, kunye namaqhuma amancinci kunye nokunye.
Le modeli yePro ithatha isigqibo sokufaka iprosesa ye-Snapdragon 732 (4G), ukongeza kwi-6/8 GB ye-RAM kunye nokugcinwa okuphakathi kwe-64 ukuya kwi-128 GB. Ibhetri eyakhelweyo yi-5.020 mAh ene-33W ehlawulisa ngokukhawuleza, efanayo naleyo yemodeli yeRedmi Qaphela i-10S, iselfowuni enomdla.
Iikhamera zale modeli ziqala ngenzwa ye-megapixel eyi-108, eyesibini yi-megapixel ebanzi engama-8, eyesithathu yi-5 megapixel telemacro kunye neyesine ngumncedisi wobunzulu be-2 megapixel. Isoftware efakwe kwi-Android 11 ene-MIUI 12. Unxibelelwano oluza nayo yi-4G, iWi-Fi, iBluetooth, iNFC, infrared, nokunye okuninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IPoco M3 Pro, iRedmi Qaphela i-10S kunye neRedmi Qaphela i-10 Pro ngamaxabiso angenakuphikiswa
Iinkqubo ezi-5 ezilungileyo kakhulu zosana lwe-Android